Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii ururka Haweenka Ogaadenniya ee Sweden oo Stockholm lagu qabtay.
Shirkii ururka Haweenka Ogaadenniya ee Sweden oo Stockholm lagu qabtay.
Posted by Daljir	/ July 30, 2017
Waxaa magalada Stockholm ee caasimada wadanka Sweden lagu qabtay shirkii ururka haweenka soomaalida ogadenia ee Sweden shirkan oo ah midkii mamulkii hore ku xisaabtami laha mamul cusubna lagu dooranayo ayaa sidii caadada inoo aheed lagu furay ayadaha quraanka kariimka oo inoo soo jeediyay Sheikh abdiwali kadibna waxaa loo istaagay heestii calanka ogadenia.
Gudoomiyaha jaaliyadda Soomalida Ogadenia ee Sweden Mudane Abdirahman bashiir oo ka mid ah xubnihii shirka lagu martiqaday ayaa khadbad dhaxalgal ah ka soo jeediyay goobta kuna amaanay dumarka Soomaalida Ogadenia inay yihiin lafdhabarta halganka ay jwxo hormuudka ka tahay sidoo kale gudoomiyuhu wuxuu ku dhiirigaliyay inay ka soo dhalaalan kaalintay ku lahayeen garab istaaga qadiyada ogadenia hadaladii gudoomiyaha waxaa ka mid ah walaahi baan ku dhaartay ruuxa aan balantu la galay naftood hurayaasha shihiiday aan ka run sheegin in maalin aan maanta ahayn in xisaabwayn sugayso.
Waxaa makarafoonka la wareegay oo ka warbixisay wax qabadkoodii Gudoomiyaha ururka Haweenka soomaalida ogadenia ee Sweden Marwo Ismahan imaan oo soo jeedisay warbixin dhamaystiran iyo waxqabad mugleh oo dadkii goobta ka soo qaybgalay ku farxen sido kale Marwo Ismahan ayaa hadyado gudoonsisay xubnihii sida dhaw ee hagar la aanta ah ula shaqeyay kuna balan qaaday goobta inay lashaqayn doonto mamulka cusub ee la doorto una tilmaami doonto waxay ku dhaanto.
Kadib waxaa shirka la wareegay gudidii doorashada mamulka ururka haweenka soomalida ogadenia ee Sweden waxaana goobta lagu doortay mamulka cusub ee labada sano ee soo socota hogaamin doona ururka waxaana hadlay xubnaha cusub oo ka codsaday xubnaha inay si dhaw ula shaqeeyan waana loo balan qaaday
Shirkii wuxuu ku soo dhamaaday jawi farxadleh oo lasku balansaday shaqo.